Goobaha Khadka Tooska ah ee Shiinaha - Koodhadhka Lacagta ee Khadka Tooska ah ee Khadka
(643 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha waa mid ka mid ah waddamada ugu awoodda badan uguna horumarsan dhaqaalaha adduunka, warshadaha waaweyn, luulka dalxiiska, waddankan seddexaad ee ugu weyn adduunka, dhammaan dhinacyada ganacsiga, oo ay ku jiraan warshadaha khamaarka, si wanaagsan ayaa loo horumariyay. .
Shiineeska waxaa lagu yaqaan howlkarnimadooda iyo howlkarnimadooda, laakiin hal muuqaal oo dheeraad ah oo dadkani leeyihiin ayaa ah xiisaha ciyaarta. Khamaarista Shiinaha waxay u muuqatay millenniyo badan kahor waxayna xiriir dhow la leedahay dhaqanka iyo taariikhda waddanka. Layaab ma leh soosaarayaasha ugu caansan ee soosaarayaasha ciyaarta oo daruuri ku leh horumarkooda, waxa loogu yeero, cayaaraha sheekooyinka Aasiya, ee adeegsada astaamaha iyo astaamaha dhaqanka bariga, oo ay ku jiraan Shiinaha. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhowr ciyaarood oo Aasiya ah oo lagu beddeli karo miisaska caadiga ah iyo ciyaaraha kaararka: Sic Bo, Mahjong, Chinese poker (13 cards), fan-tan, iwm.
Jacaylka Shiinaha ee khamaarista iyo farxad-na waxay ku qaataan waqtigooda hoolalka ciyaaraha ee casino.
Maxay yihiin xeerarka ganacsiga khamaarka ee kuyaala dal weyn oo leh tiro dad ah oo ka badan bilyan milyanka milyan? Waa maxay sharciyadu xukumaan warshadan?
Liistada Meelaha 10 ee Shirkadaha Sheega ee Shiinaha Online
Sharciyada khamaarka Shiinaha iyo aagagga ciyaaraha
Horraantii qarnigii labaatanaad, xarunta khamaarka ee Shiinaha waxay ahayd Shanghai. Tan iyo waagaas, waagii iyo dowladdii dalka way isbadaleen, waxaa jiray isbadalo ku saabsan lahaanshaha dhulalkii gumeysiga ee PRC - ilaa iyo maanta meesha kaliya ee ciyaarta halkaas oo ficil ahaan dhamaan warshadaha ciyaarta dalka ay kuxirantahay waa magaalada. ee Macau (gumeysigii hore ee Boortaqiiska, laga soo bilaabo 1999 wuxuu ka mid noqday PRC, magaalada ku taal xeebta Koonfurta Shiinaha). East Monte Carlo, Las Vegas labaad - sida ugu dhakhsaha badan ee aan loogu yeedhin geeskan midabada leh ee xiisaha leh, halkaas oo Shiinuhu ay fursad u leeyihiin inay harraad ugu dhintaan ciyaarta, dalxiisayaasha adduunka oo dhanna waxay ku raaxeysan doonaan soo dhoweynta Aasiya. Magaaladan ayaa dhowr jeer oo hore ku guuleysatay inay dhaafto Las Vegas marka laga hadlayo wareejinta ganacsiga khamaarka.
Macau, waxay ka shaqeysaa in ka badan 30 casinos oo leh kombuyuutar casri ah iyo ciyaaro kaararka, mashiinnada ciyaarta. Sidoo kale Macau waa casino ugu weyn adduunka - Macau Venetian. Magaalada gudaheeda wax walba waxaa loo habeeya habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay martida, waxaa ku yaal hoteello badan iyo hudheelo, maqaayado iyo baarar, dukaamo iyo naadiyo qoob ka ciyaaraya oo bixiya barnaamijyo madadaalo oo kala duwan
Tan iyo 2002, degaanka Makau sidoo kale waxaa loo ogol yahay in uu furo casinos ee ajaanibta, taas oo soo jiidatay dareen badan oo ka yimid maalgashadayaasha adduunka oo idil.
Sidoo kale degaannada Shiinaha, si sharci ah waxay u shaqeeyaan noocyo badan oo bakhtiyaanasiib ah, Macau iyo Hong Kong ayaa loo oggol yahay inay ku sharfaan tartanka fardaha.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan warshadaha khamaarka ee Shiinaha
Dhaqanka Shiinaha, dabcan, wuu ka duwan yahay kan reer Yurub, waxaana jira waxyaabo gaar ah oo ku jira, in kasta oo ka dib markii ay yimaadeen ajaanib (inta badan Mareykan) casinos, jawiga guud iyo xeerarka adag ee Macau ayaa aad u jilcay. Guud ahaan, soo booqdaha casino ee waddan kasta wuxuu dareemi doonaa raaxo badan. Laakiin waa inaanan ilaawin sharciyada, tusaale ahaan, had iyo jeer waa lagama maarmaan in loo hogaansamo nidaamka lebiska, oo aan la isku dhicin ilaalada, la qaato kaarka aqoonsiga, maadaama kaliya dadka ka weyn da'da 18 sano ayaa loo oggol yahay qamaarka, iwm. .
Waa wax xiiso leh in khamaarka Shiinaha waa mamnuuc in lagu ciyaaro saraakiisha maxalliga ah, sidoo kale ma qaadan kartid kamaradaha iyo qalabka kale ee waaweyn. Inta kale ee xeerarka guud waxay lamid yihiin kuwa ka shaqeeya adduunka.
Muuqaal kale oo xiiso leh oo ku saabsan ganacsiga khamaarka ee Shiinaha waa casino dul sabeynaya. Hoolalka ciyaaraha waxay ku yaalaan maraakiibta waxayna u furan yihiin dhammaan dadka Shiinaha ee aan awoodin inay booqdaan Macau. Ciyaartoydu waxay markabka ka raacayaan Hong Kong waxayna u baxayaan safar biyo dhexdhexaad ah, halkaas oo, iyadoon sharciga la jebin, ay si ammaan ah u khamaari karaan.
Profitability of warshadaha khamaarka ee Shiinaha
Shiinaha wuxuu kujiraa booska hogaaminta aduunka marka laga hadlayo faa iidada warshadaha ciyaaraha, isagoo si joogto ah ugu tartamaya 1 boos Mareykanka. In kasta oo si joogto ah looga boodayo faa iidada la xiriirta ololaha dowladda ee ka dhanka ah musuqmaasuqa, qulqulka ciyaartoy waaweyn oo ka socota Macau, ma ahan rabitaanka mas'uuliyiinta inay kordhiyaan tirada aagagga ciyaaraha ee dalka iyo sharciyeynta casinos-ka internetka, faa'iidada khamaarka ee Shiinaha waa tobanaan bilyan oo doollar sanad kasta waxayna u dhigantaa in ka badan 50% dakhliga ku soo gala miisaaniyadda dalka.
Sidoo kale qayb muhiim ah oo ka mid ah wadarta dakhliga ka soo gala warshadaha khamaarka ayaa ah saamiga ay kasbadeen horumariyeyaasha ciyaaraha moobiil ee Shiinaha. Dakhliga soo-saareyaasha horumariyayaashu waxay durba dhaafeen $ 5.5 bilyan, calaamaddani waxay kordhin kartaa sannadka 2019 illaa $ 11-12 bilyan.
Intaa waxaa dheer, Shiinaha, jihada aad u horumarsan ee khamaarka, sida elektaroonigga ah. Wadanku wuxuu leeyahay barnaamij dowladeed oo loogu talagalay horumarinta isboortiga elektarooniga ah iyo taageerada ciyaartoyda, kuwaas oo sannad kasta abaalmarinno ka qaata tartamada caalamiga ah. In kasta oo xaqiiqda ah in iibinta rasmiga ah ee softiweerka loogu talagalay isboortiga elektarooniga ah la mamnuucay, istuudiyaha ciyaarta Shiinaha ayaa ah kuwa alaab-qeybiyeyaal u ah horumarka xeel-dheer ee shirkadaha shisheeye. Ku shaqeynta mabda'a dibedda, barnaamijyada Shiinaha waxay helaan dakhli aad u badan.
Khadka Internetka ee China
Waa in la ogaadaa in khamaarka internetka ee Shiinaha si adag loo mamnuucay oo gebi ahaanba la baabi'iyay. Dowladda dalka waxay u hoggaansameysaa siyaasadda adag ee mamnuucaya wax khamaar internet-ka ah. Waxaa jira loollan joogto ah xitaa goobahaas oo si dadban u bixiya macluumaad ku saabsan bogagga ciyaaraha.
Dabcan, Shiinuhu waxay booqanayaan casinos kala duwan oo khadka tooska ah ee internetka ah, kuwaas oo hawlwadeenadooda, iyagoo og ogaanshaha dareenka muwaadiniinta Shiinaha ee khamaarka, ay ku bixiyaan adeegyadooda luuqadooda. Laakiin Shiinaha dhexdiisa, howlaha hay'adaha noocaas ah si adag ayaa ciqaab loogu muteysan karaa.
Sababta ugu weyn ee jihada khamaarka aysan u horumarin, iyo rajada ay ka soo bixi karto hooska ma weyna - tani waa la'aanta baahida dhaqaale ee dalka ee qeybtan ganacsiga. Haddii xaaladdu is beddesho, oo dakhliyada ka soo gala casinos-ka ee Macau ay si dhakhso leh hoos ugu dhacaan, waxaa suurtagal ah in mas'uuliyiinta Shiinuhu ay dib uga fiirsan doonaan aragtidooda ku aaddan qaybta internetka.
Mustaqbalka warshadaha khamaarka Shiinaha
Sannadkii 2015, Macau wuxuu diiwaangeliyey hoos u dhac rikoodh ah xagga waxsoosaarkii dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Qaar badan oo rollers sare ah ayaa ka tagay aagga ciyaarta, iyo qulqulka ciyaartoyda ka imanaya dibadda ayaa si weyn hoos ugu dhacay, sababtoo ah adkeynta sharciyada booqashada Macau. Marka, tusaale ahaan, sharciyada helitaanka fiisooyinka ayaa isbadalay, xaaladaha shaqada ee wadayaasha junket-ka ayaa noqday mid aad u dhib badan, iwm.
Laakiin khubarada ayaa sheegaya in sanadkan uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee aan faa'iido u lahayn warshadaha ciyaaraha Shiinaha. Dhawaan xaaladdu way xasilloon tahay, ololaha la dagaallanka musuqmaasuqa wuu joogsan doonaa, dowladda, oo fahamsan muhiimadda ay warshaddan u leedahay dalka, waxay abuuri doontaa xaalado raaxo leh oo horumar ganacsi leh.
Shiinaha iyo Khamaarista
Adduunyada Shiinaha ayaa lagu yaqaan inay yihiin ummad shaqo badan. Laakiin waxaa jira umaddan astaamo kale oo si badbaado leh loogu yeedhi karo xamaasad. Tani waa jacayl aan caadi ahayn oo loogu talagalay khamaarka. Shiine Naadir ah naftayda u diid in aan ku faraxsanaado inaan neerfahaaga xiiqo, adigoo sharad ku galaya ciyaar kasta ama iibsanaya dhowr tikit oo bakhtiyaa-nasiibka ah Shiinaha, khamaarka, tusaale ahaan, mahjong waxaa laga yaabaa in dhacdo kasta, xitaa haddii aysan ahayn maalin fasax ah.
Balwadda la midka ah ee Shiinaha waxay leedahay taariikh aad u dheer oo dhacdo leh, taas oo haysay dukumiintiyo badan oo xiiso leh. Diiwaanadii ugu horreeyay ee khamaarka dalkan waxaa la sameeyay intii lagu jiray xukunkii boqortooyadii ugu horreysay, taas oo macnaheedu yahay inay ugu yaraan yihiin 4000 sano. Shiinuhu adduunyada kuma siinin oo keliya baaruudda, xaashiyaha iyo wax-soo-saarka kale ee wax ku oolka ah, laakiin sidoo kale waxqabadyada sida bakhtiyaanasiibka, mahjong ama Pai Gow.
Laga soo bilaabo qarnigii toddobaad ee AD, Shiinaha muddo dhowr qarniyo ah ayaa ka hawlgalay ururo badan, kuwaas oo furay xarumo loogu talagalay khamaarka. Dadka hodanka ah ayaa noqda, inta badan guryaha khamaarka ayaa muuqday. Qarniyadii afar iyo tobnaad illaa toddoba iyo tobnaad, ganacsigan waxaa loo tixgeliyey inuu yahay mid sharaf leh oo keenay faa'iidooyin wax ku ool ah. Badanaa waxay ku lug lahayd wakiilo ka socda adduunka dambiilayaasha oo ay la shaqeeyaan saraakiisha musuqmaasuqa.
Qeybtii labaad ee sagaal iyo tobnaad - horaantii qarniyadii labaatanaad xarunta khamaarka ee Shiinaha waxay ahayd Shanghai. Waxay soo jiidataa ciyaartoy ka socota dhammaan daafaha waddanka ballaaran. Xitaa markaa, waxaa jiray casino weyn, halkaas oo aad ka sameyn karto sharad badan ciyaaro maxalli ah iyo dibedda ah. Hay'adahaani waxay kujireen heshiiskii Faransiiska ee Shanghai, iyo Degitaanka Caalamiga ee Shanghai.
Sannadkii 1847, dawladda Burtuqiiska waxay sharciyeysay khamaarka Macau. Markii dambe, dagaalladii sokeeye ee Shiinaha awgood wuxuu xukumay xukunkii shuuciga ahaa, kaasoo joojiyay dhammaan casinos-kii waddanka ka jiray, laakiin Macau, oo weli laga xukumo Boortaqiiska, waxay sii wadeen inay sii shaqeeyaan.
Markay ahayd 1999, Macao, ma dhicin waxay ahayd qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha, isbeddelada sharciga ee la xiriira khamaarka. Tan iyo 2002, halkan waxaa loo oggol yahay inuu furo ajaanibta casinos. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira in ka badan soddon Macau casino, oo bixisa daraasiin ciyaaro ah, waana meesha kaliya ee Shiinaha ku taal halkaas oo casinos-ku uu yahay guri sharci ah. Sannadkii 2010, Macau waxaa soo booqday qiyaastii shan iyo labaatan milyan oo qof, in ka badan kala badhna waxay ku ciyaareen khamaarka.
Ku dhowaad dhammaan Shiinaha waa bakhtiyaanasiib sharci ah oo ku yaal Macao iyo Hong Kong, waxaad ku sharxi kartaa tartamada fardaha. Dad badan oo Shiineys ah ayaa loo diraa safarka muddada-gaaban ee maraakiibta, in inta lagu guda jiro dalxiisyadan si loogu ciyaaro khamaar ka shaqeeya dusha sare.
, laakiin in la fahmo sababta kalgacalka noocaas ah ee Shiinaha u qabo khamaarista, kuma filna in loo jeesto taariikhda. Daraasadda su’aashani waxay u baahan tahay in la baaro dhaqanka Shiinaha. Waa inay isla markiiba dhahdaa kama hadlayno dhiirrigelinta maamulka. Kuwa ugu caansan dadkaan uma aysan aqbalin ciyaarta lacagta, iyagoo u arka inay tahay waqti lumis iyo qatar ku ah nidaamka bulshada. Sidaa darteed, taliyayaashii sida aadka ah ugu adkaa xakamaynta boqortooyo ballaadhan, had iyo jeer waxay raadsadeen inay xakameeyaan khamaarka oo xitaa badanaa way mamnuucaan.
Aragtida falsafadda Shiinaha waxaa lagu sameeyay saameyn ay ku yeesheen Confucianism, Taoism iyo Buddhist. Iyaga dhexdooda fiiro badan ayaa la siiyaa saameynta awoodaha sare. Ciyaartoyda Shiinaha in ka badan kuwa ka jira dunida reer Galbeedku waxay aaminsan yihiin qaddarka iyo nasiibka. Iyaga, noocyo kaladuwan oo aad u muhiim ah, amuuraha meesha ay ku yaalliin (xusuusnow Feng Shui), taariikhda iyo lambarka (tirooyinka caanka ah). Waxaas oo dhami waxay abuuri karaan dhalanteed xakamaynta xaaladda, taas oo inta badan keenta balwadda khamaarka.
Dhanka, ku tiirsanaanta khamaarka ee bulshada Shiinaha badanaa looma tixgeliyo inuu yahay jirro maskaxeed. Dadka noocaas ah waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo xun marka laga eego dhanka akhlaaqda, dad badana way u naxariisan doonaan, sida looga yaqaan wadamada reer galbeedka. Confucius wuxuu yiri "nin sharaf leh lacag kuma ciyaaro."
Sidoo kale waxaa mudan in lagu xisaabtamo arrimaha bulshada ee saamaynta weyn ku yeeshay cilmu-nafsiga dadka Shiinaha. Sanadihii la soo dhaafay, malaayiin dad ah oo dalkan ku nool ayaa ka adkaaday dariiqa adag ee saboolnimada illaa meel deggan, iyo xitaa barwaaqo. Sidaad ogtahay, shalay ninka miskiinka ah, ee ku guuleystay inuu dhaqso ku taajiro, wuxuu had iyo jeer doonayaa inuu adduunka tuso inuu tuuri karo lacag midig iyo bidix. Taasi waa sababta dad badan oo Shiine ahi ugu doodaan in ciyaartu kaliya u tahay raaxo.
Ha iloobin in maqnaanshaha casinos ee meelaha qaarkood aysan macnaheedu ahayn in dadka gobolkan aysan lacag ugu ciyaarin. Tusaale ahaan, mahjong waxaa lagu ciyaaraa heerarka dhabta ah ee waddanka oo dhan qarniyo badan. Ciyaartan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay jimicsi weyn oo maskaxda ah, oo waxtar u leh waayeelka, iyo madadaalo aad u fiican dhammaan noocyada xafladaha. Riwaayaddeeda, xitaa aroosyada iyo aaska.
Ololaha ka dhanka ah khamaarka
In kasta oo khamaarka Macau uu si xawli ah u korayo, haddana dawladda Shiinaha ma taageerto fikradda ah in la xalliyo naadiyeyaasha dalka intiisa kale. Intaa waxaa sii dheer, waxay si firfircoon u xireysaa casino hadda jira. Sannadkii 2010, waxaa la joojiyay howlo badan oo ka mid ah hay'adahan, oo mas'uuliyiintu waxay qabteen hawl wadeennadii khamaarka khadka tooska ah ku dhowaad boqol milyan oo doolar.
Si kastaba ha noqotee, xukuumaddu ma joojin oo ay la wareegtay bogagga bixiya macluumaad ku saabsan casinos-ka online-ka iyo bixinta xiriirka iyaga. Siyaasaddan kama tageyso taageerayaasha Shiinaha ee madadaalada noocan oo kale ah fursad maleh, iyo warshadani waxay gebi ahaanba burburisay dalka. Xitaa hawlwadeenada ajnabiga ah halista uguma jiraan inay adeegyadooda siiyaan muwaadiniinta Shiinaha.
Si kastaba ha noqotee, khamaarista dalka Shiinaha waxaa laga soo bilaabo waqtigeedii, mana ahan qof ama shay uu awoodi karo inuu helo Shiinaha si uu uga baxo hiwaayaddan.
Kasiinooyinka Shiinaha - waana la jeclaan lahaa waana la qiimeeyaa
Ma jiraa khamaar ku yaal Shiinaha? Isagoo ka hadlaya guud ahaan, xarumaha khamaarka ee halkaas ku yaal. Laakiin dhab ahaantii, waxay ka shaqeeyaan oo keliya aag khamaar keliya - Macao. Inta ka hartay waddanka ballaaran wuxuu ku shaqeeyaa mamnuucid guud oo ku saabsan dhammaan khamaarka. Sidee ayay tahay in khamaarka Shiinaha laga xayuubiyo hiwaayadiisa? Akhriso!
Taariikhda khamaarka ee Shiinaha;
Shuruucda ku saabsan khamaarka - khamaaristu waa sharci darro meel kasta marka laga reebo Macao;
Macau - Aagga khamaarka ee loo oggol yahay Shiinaha. Tartan adag xitaa Las Vegas;
Kasiinooyinka ku yaal Shiinaha ee ku yaal biyaha ama casinos "sabayn";
Khadka Internetka ee PRC:
Gabagabada meesha iyo waxa la ciyaaro Shiinaha?
mahjong oo aad waddooyinka - ciyaarahaas lama mamnuuco;
casinos ee Macau;
casinos, oo ka baxaya biyo dhexdhexaad ah.
Taariikhda khamaarka ee Shiinaha
Waxay yiraahdaan xiisaha dadka deggan Boqortooyada Dhexe ee khamaarka ayaa soo ifbaxay waqti hore oo ka badan umado kale oo badan. Markii ugu horraysay ee la xuso waxay ka bilaabmaysaa kun-kii kun oo sano ka hor BC.
Guryaha khamaarka ee Shiinaha waxay bilaabeen inay furaan qof kale kahor - xitaa qarnigii VII! Xitaa Talyaanigu wuxuu bilaabay inuu abaabulo casino kaliya qarnigii XII, iyo Faransiiska, iyo xitaa goor dambe.
Taariikhda Shiinaha oo idil waxay xiriir dhow la leedahay khamaarka. Markasta oo wadanka uu hodan noqda, sida ugu wanaagsan ee dhaqaalaha loo horumariyo, ayaa waxaa sii kordhaya goobaha khamaarka furan. Laakiin waxaa dhacday inay marar badan hoosta ka jireen garabka maafiyada, oo ay u keeneen faa'iido weyn.
Muddo dheer, illaa iyo bartamihii qarnigii labaatanaad, caasimadda waddanka ciyaaraha qamaarku waxay ahayd Shanghai. Halkan, xaafadaha oo dhan waxaa lagu dhisay casino. Waxaan ka shaqeynay hay'ad weyn, oo diyaar u ah inaan u adeegno martida si boqortooyo leh. Waxay ciyaareen dhamaan ciyaarihii lagu yaqaanay kaliya Aasiya, Yurub iyo Ameerika.
Khamaaris kale waa jasiirad Hong Kong ah. Waxaan ku ciyaarnay halkan waddooyinka, maxkamadaha, goobaha khamaarka khaaska ah iyo gebi kasta.
Khamaarka albaabka xiga ee tooska ah ayaa si firfircoon uga soo baxay Macau, kii hore illaa 1999 oo ah gumeysi Burtuqiis ah.
Si kastaba ha noqotee, sida qulqulka bilaashka ah ee khamaarka iyo casinos, iyo sidoo kale xoojinta saameynta ururada dambiilayaasha, iyadoo lagu kala duwanaanayo danaha gobolka. Sidaa darteed, imaatinka awoodda Communists ku dhowaad dhammaan khamaarka waa la mamnuucay.
Shuruucda Shiinaha ee khamaarka
Sharciga mamnuucaya casinos iyo khamaarka, waxaa la qaatay 1949. Walina waa uu dhaqan galayaa. Wax yar marka laga reebo ayaa loo sameeyay buug sameeyayaasha. Waxaa loo oggol yahay inay ku sharfaan tartanka faraska iyo ciyaaraha kubbadda cagta.
Marka laga reebo kale waa bakhtiyaanasiibka. Shiinaha, dhammaantood waa qaran. Hawl wadeenada gaarka loo leeyahay hawshaas waa mamnuuc. Xaaladdan oo kale wixii ka soo baxa Bakhtiyaanasiibka Qaranka, waxaa loogu talagalay dhismaha iyo barnaamijyada bulshada.
Waxaad dhahdaa sida Macao? Haa Haa. Tani waa mid kale oo ka reeban oo caddeynaysa sharciga. Tan iyo markii dhulkeeda markii Burtuqiiska loo oggolaaday casinos, ka dib soo celinta aagga Shiinaha bosom ayaa la go'aansaday inuu baxo, iyo xitaa inuu horumariyo aaggan.
Goobaha ciyaarta sharci ee Shiinaha
Xaqiiqdii, Macau waa aagga kaliya ee sharciga ciyaarta ee Shiinaha. Bortuqiisku wuxuu sharciyeeyay casinos-ka sanadkii 1847. Shiineyskuna waxay si rasmi ah u ansixiyeen 2002-dii.
Iyo maadaama dhulkan uu yahay meesha kaliya ee aad ugala soo bixi karto tigidhada khamaarayaasha, oo ay ku jiraan ajaanibta aadka u taajirsan, Shiinaha rasstaralsya ilaa caan. Dad badan oo caajis ah oo ku hoos shaqeeya khamaarka Bortuqiiska ayaa kobcay. Toban sano gudahood, xarumo fara badan oo raaxo leh, oo garaacay dhammaan diiwaanada.
Maanta Macau waxay si dhakhso leh ugu guuleysatay cinwaanka caasimadda khamaarka ee Las Vegas. Magaalada nus-milyan waxaa booqda tobanaan milyan oo booqasho sanad kasta. Shisheeyaha waxaa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan waxayna ku deeqayaan 1 1000 iyo qaab aan taxaddar lahayn oo lagu buuxiyo khasnadda dowladda.
Laakiin muwaadiniinta Shiinaha inay tagaan Macau ma sahlana. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu difaaco barta kontoroolka ee Gongbei, in lagu haysto qaddar go'an, qaraarkuna ma aha inuu rasmi noqdo. Saraakiisha khamaarka sharciga waa ka mamnuuc, sidaa darteed si qalad ah ugama dhacaan hantida dadweynaha.
Casinos ee ku yaala Shiinaha
Haddii Shiinuhu aadi karin Macau, haddana waxay weli yihiin ikhtiyaar kale - floating casino in Hong Kong. Maya, maya, tan looma oggola inay ka ciyaarto maxkamadda. Laakiin biyaha caalamiga ah, ma jiraan wax xakameyn ah oo Shiinuhu sameeyo. Waana halkaa si toos ah xarrago qurux badan oo manicured ah, nalalka iridescent. Adoo ka tagaya biyaha xuduuda ee Shiinaha, booqo markabka waxaa laga yaabaa inuu khamaar galo habeenkii oo dhan.
Dhanka, waxay caan ku yihiin safarada maxaliga ah ee muddada-gaaban ee safarka maraakiibtaas. Waxay u soo baxday safar qurux badan xeebta iyo khamaarka.
Ganacsigan sababo la xiriira daldaloollada sharciga ka jira ayaa si guul leh u soo koraya. Maraakiib badan ayaan ka liidan raaxada "Titanic." Iyagu waa u dheer yihiin qalabka casriyeynta casriga ahi ma xuma iskuulada Macau, barkadaha dabaasha, goobaha isboortiga, makhaayadaha, hoolalka riwaayadaha, shineemooyinka iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaa jira doonyo iyo fudeyd, tusaale ahaan, markage la beddelay. Neroskoshno, laakiin tigidh loogu talagalay cayaaraha habeenkii oo qiimihiisu yahay $ 38.
Casinos Online ee Shiinaha
Waxay u muuqan doontaa in Shiinuhu uu hamigooda ka dhaqaajin karo casinos-ka dhabta ah una rogi karo. Laakiin halkaas may joogin. Shiinaha dhexdiisa, waxaa jira sharciyo aad u adag oo mamnuucaya dhaqdhaqaaqa casinos-ka internetka iyo bogag kasta oo bixiya madadaalo khamaar.
Ku xadgudubka sharciga wuxuu dambi ka dhigayaa falalka. Kaliya ma bixin kartid ganaaxa, laakiin sidoo kale waxaad ku fariisan kartaa xabsiga.
Dhulka Shiinaha waa ka mamnuuc in la dhigo server, nidaamyada lacag bixinta, kuwaas oo kuxiran hawlgalka casino ee khadka tooska ah. dowladdu waxay kaloo dadaal ugu jirtaa sidii ay u kala shaandheyn lahayd kheyraadka adduunka. Kaliya maahan goobaha la xayiray ee casinos iyo dukaamada sharadka, laakiin sidoo kale qolalka turubka, iyo xitaa kheyraadka xayeysiiya mid ka mid ah goobahan.
Waxay ka kooban tahay khiyaanooyinka dadka kombuyuutarka waxay isku dayayaan inay hareer maraan mamnuucista, iyagoo gacanta ku beddelaya IP-ka IP-ga Shiinaha waddan kale. Laakiin marxaladdan ilaalinta isdaba-joogga ah ee Shiinaha waa mid caqli badan oo ogaanaya khiyaamooyinkan. Xitaa sida muuqata ee muuqata waxay soo jiidatay mas'uuliyadda dambiyeed.
Soo koobid: meesha khamaarka ee Shiinaha
Haddii aad dhab ahaantii aad rabto inaad ka ciyaarto wax khamaaris, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah fursadaha:
Uma qalanto khatarta iyo in lala xiriiro xarumaha ciyaaraha qowmiyadaha Shiinaha, oo iyaga la dagaallama iyaga aad u dhab ah.
0.1 Liistada Meelaha 10 ee Shirkadaha Sheega ee Shiinaha Online
3 Shiinaha iyo Khamaarista
4 Kasiinooyinka Shiinaha - waana la jeclaan lahaa waana la qiimeeyaa
4.0.1 Taariikhda khamaarka ee Shiinaha
4.0.2 Shuruucda Shiinaha ee khamaarka
4.1 Goobaha ciyaarta sharci ee Shiinaha
4.1.1 Casinos ee ku yaala Shiinaha
4.1.2 Casinos Online ee Shiinaha
4.1.3 Soo koobid: meesha khamaarka ee Shiinaha
intertops casino caadiga ah lahayn gunno deposit